पाँच नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेरबिरुद्ध माओवादी केन्द्रका सांसद ! | Hakahaki
पाँच नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेरबिरुद्ध माओवादी केन्द्रका सांसद !
१७ मंसिर, बुटवल । संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सहभागी भएका छन् ।
५ नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेरबिरुद्ध माओवादी केन्द्रका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी बुटवल पुगिसकेका छन् । प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको विरोधमा आयोजित सभामा दुबै नेता सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
सर्वदलीय भेलामा सहभागी हुन प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरु विहानै भैरहवा पुगेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला झिकिएको बिरोधमा आन्दोलन भइरहेका बेला थप रणनीति बनाउन त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरुको संयुक्त सभा हुन लागेको हो ।
भेलामा मधेश केन्द्रित दलका सांसदहरुलाई पनि बोलाइएको छ । यद्यपि उनीहरु सहभागी हुने-नहुने टुंगो लागेको छैन । भेलाको संयोजन एमालेका उपमहासचिव तथा प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक बिष्णु पौडेलले गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
बुटवलको चौराहमा हुने सभामा माओवादी नेता रायमाझी र कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।